IRENY PITSOPITSONY IRENY NO MAHAMAMY NY FIAINANA – Blaogin'i Voniary
Raha jerena amin’ny ankapobeny ny fiainana dia mety ho fijaliana, olana, sedra sy ny sisa no mameno azy. Arakaraka ny fijerinao ihany anefa no mahatsara sy maharatsy ny fiainanao. Raha mahay mankafy sy manisy lanjany ny fotoana mamy ianao, dia ho hitanao fa mahafinaritra ny fiainana.
Faly ve ianao fa misy felan-draozy ilay tahony feno tsilo sa kivy ianao fa feno tsilo ny tahon’ilay raozy ? Ilay vera efa feno eo amin’ny an-tsasany ve no hitanao sa ilay vera mbola babangoana eo amin’ny an-tsasany ? Toe-javatra iray ihany ireo fa fijery samihafa no itondrana azy. Io fijery io anefa dia manova ny fomba entinao miatrika ny zava-misy. Ilay voalohany no atao hoe fijery miabo : mitrandraka izay soa hatrany ao anatin’ny olona, ny biby, ny zavatra ary indrindra ny zava-miseho. Matetika ny olona mibanjina ny fiainana amin’io fomba io dia manana hery sy firehetam-po. Ilay faharoa indray no antsoina hoe fijery miiba, mifanohitra amin’ilay teo aloha ka mahita ny ratsy hatrany. Io indray anefa dia mitarika fahakiviana sy tsy faharisihana. Diniho fotsiny anie e ! Raha eritreretinao fa efa feno rano eo amin’ny an-tsasany ny siny iray dia mazoto ianao hanohy ny famenoana azy. Raha hoy kosa ianao hoe mbola ny an-tsasany be izao no banga dia mety ho kamo ianao hameno azy.
Inona moa no mahatonga ny Ntaolo Malagasy nandala ny aina ? Satria fantany fa avy amin’ilay Nahary ny aina ka sarobidy. Tahaka izany koa ny fotoana rehetra izay omeny anao, manan-danja amin’ny tantaranao. Ary ianao, ianao indrindra, dia sarobidy. Hoy ny mpandinika iray hoe « Raha miheritreritra ianao fa kely ka tsy mampiova n’inona n’inona ny fisianao dia manandràma mihidy ao amin’ny efitrano iray misy moka iray ». Inona no hitranga ? Ho voaelingelin’ny feon’iny moka kely tokana iny ianao, tsy hilamina ianao fa ho voakaikitra mandrapahafaty an’iny ! Ry havana, na ny moka, kely sy bitika indrindra aza manova zavatra ny fisiany ka mainka ianao. Aza dia manao tsinontsinona ny maha-ianao anao ka manimbazimba ilay Nahary anao. Matoa tonga eto an-tany ianao dia hanao tantara. Miankina aminao indrindra no mahatsara na maharatsy ny tantaranao. Koa asan’izay te-hiaina tantara mampalahelo, mampijaly sy mitanondrika lava fa ny ahy fijery miabo no filamatra entiko miaina dia mitraka lalandava aho !
Ny an-tsipirihany eo amin’ny fiainana indrindra no mahatsara azy. Tsy inona izany fa ireny fotoana mamy izay mety mandalo : segondra, minitra, ora na andro vitsy. Matetika toa samborina, toa sokirina sy tadiavina lavitra vao mahita azy. Indraindray koa anefa eo ambany maso eo ihany izy ireny fa ianao no varimbarian’ny lavitra. Azontsika alaina ohatra amin’izany ny fandaniantsika fotoana eo amin’ny solosaina sy ny finday, ka miafara amin’ny tsy firarahiantsika ny fianakaviantsika ao an-trano. Ireo anefa no mety fototra hasambarana voalohany : ny filalaovanao miaraka amin’ny zanakao, ny fijerevanao sarimihetsika miaraka amin’ny fianakavianao, ny fiarahanao misakafo amin’izy ireo sy ny sisa. Betsaka ny fotoana mamy azo ankafizina na hatramin’izay bitika indrindra na iarahana amin’ny hafa na ianao irery. Toy izany ohatra ireto tanisaiko ireto : fandroana amin’ny rano mafana rehefa reraka avy miasa, famakiana boky mahafinaritra, fiangaliana zava-maneno, fitsangatsanganana eny ambanivohitra, fiaraha-misakafo amin’ny namana, fiantsenana sy ny maro hafa.
Amaranako azy dia indramiko ny fitenin’izay dadabenay izay : « Ankamamio ny fotoana rehetra fa aza atao : haingana ma maika ! »
développement personnel gasy, empowerment gasy, fijery miabo, malagasy, mpandresy aho, mpandresy ianao